မှတ် သား စ ရာ ယ တြာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မှတ် သား စ ရာ ယ တြာ…
မှတ် သား စ ရာ ယ တြာ…
Posted by aye.kk on May 13, 2012 in Copy/Paste | 36 comments
ရှေး ဟောင်း ဗေ ဒင် စာ အုပ် လေး ထဲ တွင် ကျ မ မှတ် သား ထား ဘူး သည့် မှတ် သား စ ရာ ယ တြာ အ နေ ဖြင့် ဗေ ဒင် ၀ါ သ နာ ပါ သူ များ အ တွက် “ တြွင်းပြတ်, န၀င်းပြတ်, သက် ရောက် အ ဟော တေး ထပ် ”လေး အား ဖော် ပြ လို ပါ သည်။
“တြွင်းပြတ်, န၀င်းပြတ် သက် ရောက် အ ဟော တေး ထပ်”
သက် တည် ခါ မွေး နံ သက် ၊ ရေး ပြန် လျှက် ရော ပါ ။ တွေး ကြံ ခက် သ ဘော ပါ တယ် ၊ ဆော မ ကြာ မှန် လှ ။ တိ မြှောက် လျှက် နော ဘု ဉ္ဇာ ငယ် ၊ ဟော သု ညာ တြင်း ပြတ် ဆို ကြ ။ နော မြှောက် လို့ တိ ဘုဉ္ဇာ ၊ သိ ကုန် ရာ တ ၀ ။
န ၀င်း ပြတ် မည် နာ မ ရယ် လို့ ၊ ရှည် စွာ ပ မှတ် ရန် ၊ ကိန်း ဆိုက် လာ မ ရ ဏ ထူး ပါ လိမ့် ၊ တ ဘ ၀ ကူး ဖြစ် မည် အ မှန် ၊ သုံး လော က အ ရ ဟံ ကို ခါ မ ကျန် ဆည်း ကပ် လို့ ၊ မီး ပြတ် ဘို့ နည်း သွယ် သွယ် ၊ ကိန်း ပြု ပါ ကွယ် ၊ တံ တား ညောင် ထောက် ခါ ရွယ် တယ် ။ ရောက် လာ ဘွယ် ဘေး ပျောက် ဘို့ လေး။
အ ထက် ဖော် ပြ ပါ တေး ထပ် လေး အား ၊ ကျ မ မှ ကျ မ နှင့် ခင် မင် သူ မိတ် ဆွေ အ ပေါင်း အ သင်း များ အား တွက် ချက် ပေး ခဲ့ ဘူး ပါ သည် ။
တွက် ချက် ပေး သည့် နည်း ဥ ပ မာ လေး မှာ အောက် ဖော် ပြ ပါ နည်း အ တိုင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ….
ဥ ပ မာ ပြ ရ သော် ကား….
မိ မိ ရောက် ရှိ နေ သည့် အ သက် = ၅၃ နှစ်
ဆို ပါ စို့ ..
မိ မိ သည် စ နေ သား သ္မီး ဖြစ် သော် စ နေ ဂြိုလ် သက် = ၁၀ နှစ်
မိ မိ ရောက် ရှိ နေ သည့် အ သက် + မိ မိ ၏ မွေး နံ ဂြိုလ် သက် = ၅၃+၁၀= ၆၃
၆၃ အား ၃ ဖြင့် မြှောက် သော်= ၁၈၉
၁၈၉ အား ၉ ဖြင့် စား သော် = ၀ ဖြစ်ပါသည် ။ (န ၀င်း ပြတ် ပါ သည်)
(ထို နည်း အ တိုင်း ပင် ၉ ဖြင့် မြှောက် ပြီး ၃ ဖြင့် စား ပါ ၊ အကြွင်း ၀ ဖြစ်လျှင် တြွင်း ပြတ် ပါ သည် )
(မှတ်ချက်) မိမိရောက်ရှိနေသည့် အသက်အား (၃)ဖြင့်မြောက်(၉)နှင့်စားပါ။အကြွင်း(၀)ဖြစ်လျင် န၀င်းပြတ်ပါသည်။
မိမိရောက်ရှိနေသောအသက်အား (၉)ဖြင့်မြောက်(၃)နှင့်စားပါ။အကြွင်း(၀)ဖြစ်လျှင် တြွင်းပြတ်ပါသည်။
ဖော် ပြ ပါ နည်း အ တိုင်း ။ မိ မိ ကျ ရောက် နေ သည့် အ သက် ,သက် ရောက် အ တွင်း ။ တြွင်း ရော ။ န ၀င်း ရော ။
ပြု လုပ် ကြည့် ပြီး ။အ ကြွင်း (၀) ဖြစ် နေ လျှင် ။
အ သက် သေ ကိန်း( မ ရ ဏ ) ကြုံ နိုင် သ ဖြင့် ။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အား အ ချိန် အ ခါ မ လပ် ဆည်း
ကပ် ကိုး ကွယ် ပူ ဇော် ပြီး ၊ တံ တား ခင်း ခြင်း ၊ ဗော ဓိ ညောင် ကိုင်း ထောက် ခြင်း စ သည့် ကု သိုလ် ကောင်း
မှု ယ တြာ တို့ ကို ပြု လုပ် ရ မည် ဖြစ် ပါ သည် ။
ထို ရှေးဟောင်း ဗေ ဒင် တေး ထပ် လေး မှာ ကျ မ အ နေ ဖြင့် မှန် သည် ဟု ထင် မြင် မိ ပါ သ ဖြင့် ဗေ ဒင် ၀ါ သ နာ ပါ သူ များ အ တွက် သိ ရှိ မှတ် သား စ ရာ အ နေ ဖြင့် သော် လည်း ကောင်း ယ တြာ ပြု လုပ် နိုင် ကြ ပါ စေ ရန် သော် လည်း ကောင်း စေ တ နာ ဖြင့် ရေး သား ဖော် ပြ လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။
သုံးနဲ့မြှောက်ပြီး ကိုးနဲ့စားရမှာလား
ကိုးနဲ့မြှောက်ပြီး သုံးနဲ့စားရမှာလား ခင်ဗျ
၃ နဲ့မြှောက်ပြီး ၉ နဲ့စား … အကြွင်း ၀ …
၉ နဲ့မြှောက်ပြီး ၃ နဲ့စား အကြွင်း ၀ ..
အဲလို တူနေမှ လားပဲ …
မှတ်ချက် ။ ။ ရမ်းတုတ်ခြင်း …
ရလဒ်ကို ၃နဲ့ မြှောက်ပြီး ၉ ဖြင့်စား..
ရလဒ်ကို ၉နဲ့ မြှောက်ပြီး ၃ ဖြင့်စား..
အကြွင်း=၀ ဖြစ်က တြွင်းပြတ်,န၀င်းပြတ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂါဆို ၃
ကယ်ဘာဦး.ဖေတို့ ..မေတို့ ..
ဥဿာစိန်ပန်းဒန်လှကိုရှာ……….အိတ်ထောင်ထဲ အမြဲထည့်စရာ ဆိုလားဗျာ…………
၃ ကြွင်းနေလို့ ဗျ။ဘာဖြစ်မှာလဲဟင်။ပြောပြပေးနော်
တွက်ကြည့်တာ အဝေးကြီးလိုသေးတယ် ..
အကြွင်း ၁၁ တဲ့ဗျ …
ဇီးရိုး မဟုတ်ဘူး .. ပျော်ရိုက်ဒါ …
တစ်ခုလောက်တော့ မေးရဦးမယ်ဗျ ..
၁၁ ဆိုရော ဘာဖြစ်တတ်သေးလဲဟင် …
အရင်ဘ၀က ဗိုက်ကလေးဆီကချီးထားတဲ့ အကြွေး ဒေါ်လှ ဆယ့်တစ်သိန်း ပြန်ဆပ်ရကိန်းရှိသတဲ့
အဲ .. အကြွေးဆိုမှ အမှတ်ရတွားဒယ် ..
ဘီအီးအကြွေး ပြန်ဆပ်ဦး …
မြောင်းတကာကိုဗိုက် ကတော့ဖြင့် ဆိုင်တကာ့ဆိုင် အကြွေးယူနေပါကလား…………
ကိုကိုအံ့ ရဲ့ ၃ နဲ့ ၉ နဲ့ စားတာ ၁၁ တော့ကြွင်းလို့မရဘူးထင်တယ်
၁၁ ကကြွင်းလို့ မရတော့…
၁၁ မီးငြိမ်းအောင်တော့ ၀ကြွင်းမှရမယ်…။
မြှေက် ကြည့် စားကြည့်ရာ တွင် သုံည (၀) မဟုတ်ပါ
ယဒြာ ခြေရန်မလို ဟုထင်ပါသည်။
အန်တီအေးကေ ခင်ဗျ ။ ဖတ်သွား မှတ်သွားပါသည် ။ အားမှ အေးဆေးတွက်ကြည့်ရပါဦးမည်။
သုံည နှစ်ခါ ကြွင်း ပါတယ် ခင်ဗျ..
စောစောစီးစီး နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်နဲ့တူပါရဲ့ဗျာ
ဗိုက်ကလေးဆီက အကြွေးတွေ မသေခင် လာတောင်းထားကြပါ ရွာစားတို့ ရဲ့
ကျနော် တစ်ကယ် သုည ကြွင်းသမို့ညက အိပ်လို့ တောင်မပျော်ဘူး..
ရေချိန် မကိုက်တာလဲ ပါမယ်ထင်တာပဲဗျာ..
မကြာခင် အသက်တစ်နှစ်ထပ်ကြီးတော့မှာမို့အဲဒီအချိန်ကိုစောင့်ရင်း ကောင်းမှုကုသိုလ်လေး လုပ်သွားပါဦးမယ်.
သေတော့လဲ အေးဒါဘာဘဲဗျား..လူ့ ဘ၀ကြီးကို ရေလည်စိတ်ကုန်နေပါပြီ..
ဖွားဒေါ်ဂျီး ပွစိပွစိ လုပ်လိုက်တာနဲ့ ..
လောကကြီး နေချင်စိတ် မရှိတော့တာ မဟုတ်လား ..
ပြီး လူ့ဘဝဆိုတာ …
နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာကြီးလို့တောင် ပြောတာ ကြားဖူးသေးတယ် …
ချီးပေကြီး အကြောင်း မပြောပါနဲ့ ဗျား..
ဗေဒင်ကို အရမ်းစွဲ အရမ်းယုံတာမယုံတာထက်
ရတနာသုံးပါး ဆည်းကပ်တာလဲ ပိုတယ်လို့မရှိပါဘူး…
ညောင်ထောက် တံတားခင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးပြုယတြရာမျိုးကလဲ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး..နော
စကားအတင်းစပ်လို့ ဗဟုသုတအဖြစ်နဲ့ စကားလက်ဆောင်ပါးခါပြောပြချင်ပါတယ်..
ဗေဒင်ပညာနည်းကျယ်စွာ၊ဖွေရှာရှူံ့ ညှိအကျိုးရှိလို့ ဆိုထားပါတယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ သမာဓိအားနဲ့ ဘုရားမှာထိုသူအတွက်အစီအရင်ပြုလုပ်ပြီးဆုတောင်းမေတ္တာ
Tin Lyn Aung says:
ကျွန်တော့ ဦးငယ်ရဲ့ လက်ရှိအသက်မှာ နိုဝင်ဘာလကုန်မှ ၄၆ နှစ်ပြည့်ပါမည်၊ ၀ ကြွင်းနေပါသည်၊
ယခုအချိန်မှနိုဝင်ဘာ သူ့မွေးနေ့ တိုင်အောင် ဂရုစိုက်ရမည်လား ဒါမှမဟုတ် မွေးနေ့ကျော်ပြီးမှ ၄၇နှစ်မပြည့်ခင်ထိ သတိထားရမည်လား ဖြေကြားပေးပါရန်
၄၅ နှစ်တိတိကျော်လွန်ပြီးရက်စွန်းသွားတာနဲ့ ..
အသက်၄၆ နှစ်ပြည့်ပြီးရက်စွန်းသွားရင်အသက်၄၇ နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်..
နှစ်ခုလုံးနဲ့ သာသက်ဆိုင်နေတာမို့ ..
ရောက်ရှိအသက် ၄၆ နှစ်မှာ…
လူကူးသန်းသွားလာနေတဲ့တံတားအိုတွေ့ ..့ ရင်ပြုပြင်ခါအသစ်ပြန်လည်ခင်းပေးပြီး၊ဗောဓိညောင်ထောက်ခြင်းဖြင့်..
အန်တီအေးရေ … စနေတွက်ကြည့်တာ ၃ နဲ့မြှောက်ပြီး ၉ နဲ့စားရင် အကြွင်းမပြတ်ဘူး …
၉ နဲ့မြှောက်ပြီး ၃ နဲ့စားရင်တော့ အကြွင်းပြတ်တယ် … အဲဒါကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟင် ……..
အမအေး ခင်ဗျာ ..
ကျနော် ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးသင်ပေးလို့ ဂြိုဟ်သက်တွေကို လင်္ကာနဲ့ ကျက်ထားခဲ့တာ ..
အခု တချို့ဟာတွေ မေ့နေလို့ဗျာ ..
အဲဒါ ပြောပြပေးပါလားလို့ …
ကျနော် မှတ်မိနေသေးတာတွေ ကတော့ ..
… တနင်္ဂနွေ ဂဠုန် အရှေ့မြောက်ကြုံ နေတုံ ၆ နှစ်မျှ ..
တနင်္လာ ကျား တစ်ဆယ့်ငါး နေငြား … ရပ်က ..
အင်္ဂါ ခြင်္သေ့ အရှေ့တောင်ကွေ့ မရွေ့ ၈ နှစ်မျှ ..
ဗုဒ္ဓဟူးဆင် တောင်ရပ်ခွင် နေလျှင် ၁၇ ရ ..
ကြာသပတေးကြွက် ဆယ့်ငါးပတ် နေလျှက် … က ..
သောကြာမှာပူး မြောက်စူးစူး အထူးနှစ်ဆယ် စွန်းကယ် တစ်နှစ်ရ …
စနေ နဂါး …
ဒါတွေပဲ မှတ်မိတော့တယ်ဗျ … ကြားထဲက စာသားတွေကို မှတ်မိတော့ဘူး ..
“ ဂြိုလ်တို့ ၏အသက်နှင့်အရပ်ဆောင်ပုဒ် ”
၁။ တနင်္ဂနွေဂဠုန်၊ရှေ့မြောက်ကြုံ၊နေတုံခြောက်နှစ်မျှ ။
၂။ တနင်းလာကျား၊တဆယ့်ငါး၊နေငြားရှေ့ရပ်က ။
၃။ အင်္ဂါခြင်္သေ့၊ရှေ့တောင်ကွေ့ ၊မရွေ့ ရှစ်နှစ်မျှ ။
၄။ ဗုဒ္ဓဟူးဆင်၊တောင်ရပ်ခွင်၊နေခြင်ဆယ့်ခွန်ပ ။
၅။ နောက်တောင်စနေ၊နဂါးမြွေ၊မှတ်လေဆယ်နှစ်မျှ ။
၆။ ကြာသာပတေးကြွက်မျိုး၊တဆယ့်ကိုး၊ဆိုရိုးအနောက်ကျ ။
၇။ ရာဟုဟိုင်းဆို၊နောက်မြောက်ကို၊ရေလိုဒွါဒသ ။
၈။ သောကြာပူးမဲ့၊မြောက်တဲ့တဲ့၊နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ရ ။
ခုလို ပြောပြပေးတာ ..
ကျေးဇူးပါ အမအေး ခင်ဗျာ ..
ကူးယူ မှတ်သား သွားပါကြောင်း …
ဆရာမ အေးကေကေရေ… အတော်ကောင်းတဲ့နည်းလေးပါခင်ည….
သားလည်း တွက်ကြည့်တာ သုညမဖြစ်သေးလို့… ဦးဗိုက်ကလေးလို..
ဆရာမ မှာ… တခြားအသုံးဝင်မယ့် ဗေဒင်နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ ရှိလိမ့်မယ်လို့
သား ယုံကြည်ပါတယ်။ အခါသင့်အခွင့်သာရင် ဂေဇက်မှာ မျှဝေပေးပါဦးဗျာ…
“ဥစ္စာပျောက် အဟောတေးထပ်” လေး